China Counter-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evaporative Yakavharwa-redunhu Kutonhorera Mugadziri uye Mutengesi | Yubing
Chigadzirwa chekuita tsananguro
Kufananidza neyakavhurika-sisitimu inotonhorera shongwe, zviri nyore kuchengetedza chinhu chakasarudzika cheICE's evaporative yakavharwa wedunhu anotonhorera inova yakasarudzika sarudzo yechero kutonhora system iine mamwe mabhenefiti anotevera:
► Deredza kunwa kwemvura, chengetedza simba uye zvigadzirwa zvekugadzirisa
► Dzivisa iyo yakakosha njodzi yekukanganisa zvinhu mune kupisa kupisa kana zvivakwa zvakafanana.
► Kumisikidza kwakakosha uye mashandiro emari yekuchengetedza (hapana kudikanwa kwepombi, mavhavha, ekuwedzera pombi mabasa uye nezvimwewo)
►Hupamhi hwekushandisa nharaunda - yakavharwa-chiuno michina inowanikwa kuti ishande mune yepasi-kutonhora tembiricha yekunze. Izvo zvine hunyanzvi hwakanyanya kubva kunotonhodza maindasitiri maitiro ekushandisa kuchengetedza tembiricha munzvimbo dzedata uye makamuri emakomputa kugadzira kemikari.
ICE Evaporative counter-kuyerera yakavharwa yedunhu inotonhorera chimiro uye yakakosha zvinhu sumo:
ICE evaporative yakavharwa chiuno kutonhora shongwe yakaisirwa bhasiketi yemhando yekumwafa minyu inoramba yakavharika pasina kupa iyo uye nekugara kugovera kwemvura kuwedzera kupisa kupisa pakati pemhepo, mvura uye nehurongwa hwemvura kuti iwedzere kupisa kwekuramba kushanda.
Iyo pfapfaidzo kamwene yakaiswa muhuro-isina mapaipi ekuparadzira mvura kune nyore disassembly.
Tsvuku Yemhangura Tube
Chinokosha chemubhati chiri kunyorera nemhando yepamusoro T2 mhando yemhangura tsvuku iyo yaitenga kubva kune anozivikanwa brand mugadziri kuti ave nechokwadi chekuita uye kugadzikana kuita kweedu zvigadzirwa.
Yakagadzirwa uye yakagadzirwa nePVY kudzikisa kurasikirwa kwemvura panguva yekunyorova uye inogumira iyo yekukweva mwero kudzikisa kushandiswa kwemvura uye kudzivirira chiyero.
Iko kune damper inoshanda kudzora kuyerera kwemhepo panguva yekushanda kweshongwe kutonhora kwaiswa mune imwe mvura, mweya kupisa pombi sisitimu kana yakafanana kutonhora maitiro ekudzivirira kurasikirwa kwekupisa panguva yekuzorora kwemidziyo kunyanya munguva inotonhora mamiriro ekunze.
Kana tembiricha yemuchadenga iri pamusoro pe0 ℉ (-18 ℃), nemudziyo wemagetsi bhesheni remvura bheseni harizodzike kupfuura 40 ℉ (4.4 ℃). Iko kune yakaderera kuchengetedzwa kwemvura yakaiswa mukati meheater kuona kuti inongoshanda chete kana yakanyudzwa mumvura. Zvese zvinhu zvine chekuita nemagetsi heater zvakaiswa mukati mekesi uye zvinoenderana nevekunze mashandiro.
Slope-dhizaini Bhesheni reMvura
Dhizaini dhizaini (inorerekera kune inosvibisa kubuda kubuda) kudzivirira kudzikira kwemvura uye strainer yesimbi isina chinhu ichavandudza kufashukira uye kusvibiswa kunoyerera panguva imwe chete kunobvisa zvinosvibisa uye tsvina iri mubheseni.
ICE yakajairwa kutonhorera shongwe inoshandisa yazvino yakanyanya ngura-inomiririra yakavharwa simbi jira iyo ine zinc seyakanyanya substrate, yakabatana neAl, Mg uye trace huwandu hwesilicon. Hupenyu hwebasa i3 ~ 6 nguva yakareba uchienzanisa neakajairwa aluminized zinc simbi sheet uye kupisa-kudzivisa uye kupisa kwemafuta chinhu kwakanyanya.
Pashure: Kuyambuka-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evaporative Yakavharwa-redunhu Kutonhorera
Zvadaro: ICE Chemical Dosing System yeMvura Kurapa muKutonhodza Shongwe Sisitimu
Technical Parameter dzeCounter-kuyerera Yakavharwa-redunhu Kutonhora Shongwe
Kuwedzera pombi saizi
Kushanda Pressure Range
Counter-kuyerera yakavharwa wedunhu kutonhora shongwe